Rwanda-Senegal: nyika mbiri dze "hama" dzinosangana muParis nedhijithali - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » KWEZVISUNGO »Rwanda-Senegal: nyika mbiri dze" hama "dzakaungana muParis nedhijithali - JeuneAfrique.com
Rwanda-Senegal: nyika mbiri dze "hama" dzinosangana muParis nedhijithali - JeuneAfrique.com
Paul Kagame naMacky Sall vakashanyira Ichishanu yeViva Technology muParis. Nyika mbiri idzi, dzakasiyana-siyana mumuganhu uyu, dzichidzivirira maitiro avo ega digital.
Pakushanyira kuParis, Mutungamiri wenyika yeRwanda Paul Kagame aive achibatanidzwayegore rechipiri rinopfurikidza kuViva Technology, rakatsaurirwa kune zvinyorwa uye kutanga-ups. Akawana gore rino sangano rake reSenegal uye "mukoma" Macky Sall, iye pachake ari kushanyira guta guru, kwaakabatanidzwa musi weChitatu. kusayina kweChrischurch Chikwata pamusoro pekuparadzirwa kwemagandanga munharaunda. Vakuru vaviri vehurumende vakatora chikamu mumutungamiri akatungamirirwa naasachigaro weBurisi rePublicis Groupe, avo vaLévy, pedyo naPaul Kagame.
Vakuru vaviri vehurumende vakakokwa musi weChishanu, 17 May, kuzokurukura nezvemagetsi ekugadzirwa kwekombiyuta mumari yeAfrica. Uye panguva Rwanda ine musoro unotanga kuSenegal maererano nehuwandu hwemagetsi. Kazhinji anounzwa somunhu kutungamirira digitaalinen hubs yacho kondinendi, Rwanda, izvo wamuka kuti pachinzvimbo chevatatu wokupedzisira 29e Kuita Business chepamusoro the World Bank - kana kunyika yacho 2e shure kuMauritius - Kigali anoda kunyika kuedza kwekambani dze tech.
Uchapupu hutano digitaalinen kwezvakatipoteredza muRwanda, kutanga-up of kuti nyika vanhu mamiriyoni 12 kuti vakakwanisa kumutsa mamiriyoni 19 muna 2018 - kana mamiriyoni 8 kupfuura Ethiopia. "Ichi chiyero chigumisiro chekutsvaga kwedu mune teknolojia. Nhasi, zviri nyore kuisa bhizinesi muRwanda. Kuwedzera Manyiminya faibha munyika uye kuvapo zvivako KLAB akadaro (a kutanga-up mazai chenguva duku) aivabatsira kusikwa ezvinhu, "anodaro Soraya Hakuziyaremye, Rwandan Minister of Trade uye Industry , iripo mukutumirwa kweMutungamiri wenyika muParis.
Africa yakashaya hurumende yezvekushandura, haizombofi yakasvibiswa ye digital
Macky Sall, panguva iyi, anoona digital sechimbo chinokosha chekuwana kubuda. "Africa yakashaya hurumende yezvematongerwo enyika, haizombofi yakasununguka kudivi," yakanyevera mukuru wehurumende yeSenegal. Izvozvo zvinotarisirwa kuona chikamu ichi kuwedzera 10% yeGDP, kuburikidza nekugadzirisa mabasa uye kubudirira kwehupfumi. Knowledge City of Diamniadio, supercomputer yakapiwa muna July, kushandiswa kwekubhadhara mari yekugadzirisa zvemabhizimisi, hupfumi mu fiber optic infrastructure, inotarisa mune zvesayenzi uye yekombiyuta ...
Macky Sall akataura nhanho dzakasiyana-siyana kupupurira "kuda kwake" mune zvematongerwo enyika kuti aone nyika yake ichikwidziririra kune hupenyu hwemazuva ano, kushandura mafungiro ehurumende munyika yose: "Africa haina kungotumira vatambi vakuru kana vaimbi vakawanda, asi uyewo hukuru hukuru uye injini, "aida kuyeuchidza.
Isu tine vanhu vazhinji vane zvipo vanoshumira kune dzimwe nyika. Kana tikasimudzira nzvimbo yakarurama, ivo vachashumirawo Africa
Mutungamiri wenyika yeRwanda, nokuda kwechikamu chake, akasimbisa kudiwa kwekutsvaga muhutano hwakasiyana-siyana kushandisa zvizere zvinoita zveAfrica kutanga-ups. "Africa ine vanhu vakawanda vane matarenda asi inoshumira nyika yose. Kana tikasimudzira nzvimbo yakakodzera, ivo vachashumirawo Africa, "akadaro panhengo, achitaura muenzaniso weAmerican University Carnegie, iyo yakatanga iyo yeAfrica antenna, iri muKigali, mumakore 2015.
Igaga-purogiramu yeKigali Innovation City, nharaunda itsva yakatsaurirwa kune unyanzvi hutsva, hunofanirwa kuunza pamwe nedzimwe zvikoro nemayunivhesiti, laboratori uye makambani, achiri pasi pedzidziso. Maererano neRwanda reRwanda Trade, Rwanda inotarisira kukwidza madhora madzinza gumi nemadhora emwaka uyu wegadziriro iyi.
Dambudziko rekubhadhara mari
Mushure mokupindira kwavo, vatungamiri vaviri vakatanga kushanya pamwe chete kweAfatech space, yakatsaurirwa kuAfrica kutanga. Vamwe 160 vaduku vaduku vanobva kuMorocco, Algeria, DRC kana Mauritius vakaratidzira maitiro avo uye vakagovera nzvimbo yacho neimwe yezvinonzi digital heavyweights: Jumia, imwe ichangobva kutanga e-business platform muNew York. Sangano reInternational Organization of La Francophonie (OIF), rakasarudza mutungamiri wenyika yeRwanda, Louise Mushikiwabo, kutungamira muna Gumiguru 2018, raive nemureza wavo kwekutanga.
Iyo chiratidzo ndiyo mukana wemakambani maduku kukurudzira kutarisa kwevatengi venyika dzakawanda uye magamba makuru. "Dambudziko nhasi, maererano nekutsvaga kwekutsvaga, ndekuita kuti zvive nyore kune vashandi vezvematongerwo enyika uye makambani kuti vave nekuwana mari shoma shoma, iyo inonetsa, kunyanya pamusoro pemitengo banking system inoshanda kuAfrica. Tinofanira kuzarura kune marudzi akasiyana-siyana ekubhadhara mari, zvakadai sekuchengetedza mari, uye kuisa mitemo yakakodzera kuti tive nenzvimbo ine utano kuvarimi, "akadaro Soraya Hakuziyaremye.
Africa ichakura kuburikidza nekombiyuta yemagetsi, iyo ndiyo nharaunda yekuvapo kwenyika dzedu
The nhume yaiumbwa kissaa Sall kusanganisira gurukota Digital Economy uye Telecommunications, Ndeye Ndiaye Diop Tické, gurukota Foreign, Amadou Ba, uye mumiririri French muDakar, Christophe Bigot. President wokuSenegal uyewo akasangana French gurukota Economy, Bruno Le Maire. With startups maviri namashanu chipo uye rudzi Kusviba panguva chokuratidza, Senegal aida kuratidza kuti iye aiva nenzvimbo yaro digitaalinen soumambo.
Nzira yekufananidza neRwanda yake "hama", iyo hutungamiri hwaakagamuchira mumunda wehutano uye ruzivo rwekutaurirana. "Rwanda ndiyo muenzaniso kuSenegal" mundima ye digital, yakagamuchirwawo Senegal mushumiri weDynamic Economy. "Nyika yedu haina kusiyiwa kunze," akabva aenderera mberi achiti: "Hatina chakanosarudza. Africa ichakura kuburikidza nekombiyuta yemagetsi, iyo ndiyo nharaunda yekuvapo kwenyika dzedu. "
Indaneti inodhura zvikuru
Kuti atsigire ayo kutanga-kumusoro, Senegal zvakanaka vakapakata akazvitsaurira mari vechidiki nemadzimai kubatsirwa zvakananga yapurezidhendi. Papa Amadou Sarr ndiye musoro mudziyo: "Tine muunganidzwa dzinopfuura mabhiriyoni 30 CFA mafranc ($ mamiriyoni 50) pagore kusunda Entrepreneurs kuburikidza zvemari, zvekushandisa kubatsirwa uye kurovedza. In chesamende Kana digitaalinen, isu chamakamisa pavane bhiriyoni 15 FCFA (anenge € mamiriyoni 25) "kutsigira kanda startups, anotsanangura kudaro.
Macky Sall, zvisinei, akacherechedza chipingamupinyi pakukura kunotungamirirwa ne digital: mari yeInternet connection. "Indaneti ichiri inodhura zvikuru muAfrica," akadaro mukuru wehurumende yeSenegal, uyo uyo akapararira kupinda muhutano huri dambudziko munyika ino.
Kutarisa kwaMacky Sall kuFrance, kwakarongerwa kuguma musi weMugovera, ndokuenderera nemusangano naValérie Pécresse, purezidhendi weIngle-de-France. Mutungamiri Paul Kagame, uyo akabva ashanyira Munyori Mukuru weLa Francophonie, uyo aimbova Mutungamiri wezvekune dzimwe nyika Louise Mushikiwabo, panzvimbo yeOIF, achabva kuParis musi iwoyo.